Nyamavhuvhu 8, 2018 arun
Mheni Network anowedzerawo kuti 3000 nodes, chinzvimbo Nzira 100 BTC
Mheni Network mberi kwayo kukura nokukurumidza parinopfuura 3000 nodes pamusoro mainnet Network. Data kubva zvichiongororwa zvekuvaka 1ml.com inosimbisa kuti Mheni Network kwakaita chinzvimbo yakawedzera 85% kare 30 mazuva, kuunza mari mainnet Mheni kwakazara kuna 97 BTC ($628,000).
Mheni yakanga pakutanga debuted vakapoteredza kutanga 2018 ayo mainnet muchimiro, nokuwedzera kuwedzera kuburikidza Q2. In May 2018, Kukwanisa vakaramba nekaupenyu yakaderera panguva 18 BTC, zvinoshamisa kuwedzera asati atanga muna July 2018.
Chidzidzo Yale Economist inoti nemigove mumabhizimisi zvose unofanira Bitcoin
Maererano naPurofesa Aleh Tsyvinski, Bitcoin kuva chinokosha imwe Portfolio, pasinei mumwe munhu chaizvo cryptocurrency kana kwete. Nokuti Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kuvakwa munhu Portfolio, Economist anoti Bitcoin vanofanira pamusana kanenge 6%. Vaya zvishoma chaizvo munyika dzakawanda dzakakurumbira cryptocurrency, unofanira 4%. Zvisinei munhu nezvetsika yacho, Bitcoin vanofanira vanoumba kushoma pakati 1% ane Portfolio, nokuti diversification zvinangwa.
The kudzidza vanoda, Nengozi uye Returns ose Cryptocurrencies, rinotaurawo mumwe oga yakanaka kuchiitwa cryptocurrencies kana zvichienzaniswa tsika mumatanda uye zvisungo. Achishandisa Sharpe kuti reshiyo, Tsyvinski akaratidza kuti digitaalinen dzeEurope anoratidza yepamusorosoro raizoshandiswa kudzoka, pasinei avo dzikawanda volatility. wo, muchidzidza akagumisa kuti tichimhanya uye investor kuteerera vari vatyairi anokosha mutengo.
Kraken Daily Market Mushumo 07.08.2018
$117M nhumbi mhiri misika zvose nhasi